Chii chauchaita kana iwe uchizoguma wave pawiricheya? | Karman® Mawiricheya
Paunopera mune wiricheya, Chinhu chekutanga chingangouya mundangariro unogamuchira sei chiitiko chinoshandura hupenyu mu upenyu hwako. Kudzidza kuti uchafanirwa kushandisa a wiricheya kwezuva nezuva kufamba ingaratidzika seinotyisa kana yakaoma kubata. Pakutanga, hausi mukana uri nyore kubvuma.
Semuenzaniso, vanhu vakazvarwa vaine chimiro chemuviri vakadzidza kurarama navo mamiriro. Vazhinji vevanhu vari muchikamu ichi vangadai vakawana mhinduro kuitira kuti vakwanise kurarama vakazvimiririra uye kuburikidza nebasa ravo rezuva nezuva. Vamwe vanhu vanozoziva gare gare mukati upenyu kuti ivo vachazoda kutanga kuzvigadzirisa pachavo mu wiricheya nekuda kwekunetseka kwehutano. Muchiitiko ichi, vanhu ava vakasangana ne kugona kufamba uye anogona kurova nhanho yekushungurudzika uye mubvunzo hupenyu tichienzanisa ne upenyu vakararama kare. Uyezve kune avo vanongoerekana vachida wiricheya nekuda kwetsaona. Ivo vanowanzo kuve ivo vanowana iwo wakanyanya kushatirwa.
Mamiriro ese ezvinhu anosiyana; zvisinei, mune dzakawanda nguva hakusi kurasikirwa kwe kufamba izvo zvinokonzeresa kusagadzikana asi iyo pfungwa yekuzviparadzanisa nevamwe uye kutonga. Nekudaro, nekufamba kwenguva, moyo murefu, uye nemaonero akanaka, iwe unozodzidza maitiro ekuchinja maonero ako uye kugadzirisa kune zvakakukomberedza ne wiricheya.
Paunenge uri newiricheya mushandisi, chinhu chekutanga chaungaite kufunga kuti ungashandise sei mune yako yemazuva ese upenyu. Iwe uchapedza nguva kusvika pakuziva chinhu chekune imwe nyika uye kudzidza maitiro ekugadzirisa yako mararamiro zvichibva pane zvausingakwanise. Zvinotora nguva uye zvirokwazvo imwe nguva kujairira iyo shanduko nyowani. Nekudaro, kana uchinge wajairana neyako kurarama kutsva mamiriro ezvinhu, iwe uri nhanho imwe padhuze nekugadzirisa kushomeka kwe kufamba.
Pfungwa ye kushandisa wiricheya unganzwa sekunge uri kurasikirwa nerusununguko kubva mukuzvimiririra. Izvo zvinogona zvakare kudzikisira kutonga kwako nezve zvauri uye kunzwa kusava nechokwadi nezvako. Kunzwa kusuruvara, kushungurudzika, uye kutsamwa manzwiro echisikigo. Nekudaro, pachinzvimbo chekuzvichengetera iwe pachako, govana manzwiro ako nekuzvinyora pasi mugwaro kana kutaura neshoko kushamwari kana nhengo yemhuri. Zvikomberedze nekutambira vanhu vane pfungwa dzakavhurika vanozowedzera mikana yekukunda matanho asina kunaka emanzwiro. Kutsvaga nharaunda kana boka rekutsigira kunobatsirawo iwe kuona kuti hausi wega. Kunyangwe zvisingaite kuvandudza mamiriro ako epanyama, zvinokupa iko kusimbiswa kwekuti iwe unofanirwa kukwanisa kugamuchira shanduko dziri kuitika.
Tarisiro ndiwo maonero ekuona kwatinoita nyika. Kana tikazviona kubva pakuona, hazvina kushata sezvazvinoratidzika. Kana vanhu vatarisana ne itsva shanduko mune yavo upenyu, vanowanzozviona kubva pakuona zvisina kunaka nekuda kweshanduko dzavanofanira kusangana nadzo. Tsvaga chiyero chakakodzera. Tarisira matambudziko matsva. Tarisana nezvikanganiso nekutadza. Izvi hazvizongokubatsire iwe kuchinjira kune yako mararamiro matsva asi zvakare uve munhu akasimba. Kutsvaga zviitiko ne wiricheya kuedza uye kukanganisa uko kunokutendera iwe kuti uwane nzira yakanakira iwe. Kwete zvese zvichave zvakatsetseka pakutanga asi kana iwe uchinge wakunda chipingamupinyi, zvinhu zvinowira munzvimbo kuva mamiriro akasununguka.